कान्तिपुर मलका महाप्रबन्धक अमर निरौलासंग चाडपर्व विशेष कुराकानी :
कान्तिपुर मलका महाप्रबन्धक अमर निरौलासंग गरिएको चाडपर्व विशेष कुराकानी :
१ .कान्तिपुर मलमा बिगत २०६४ साल देखी आजका मिती सम्म काम गर्दा के–कस्ता अनुभवहरु संगाल्नु भयो ?
कुनै पनि काम सजिलो हुदैन तर त्यसलाई सहज कसरी बनाउने भन्ने मुल कुरा हो । त्यसमा पनि बसपार्क जस्तो ठाउँमा विगतका वर्षहरुमा मानिसहरु साँझ ५ बजे पछि हिड्न सक्दैनथे । तर यस ठाउमा आजभोली धेरै सुधारका कामहरु भएका छन् । जस्तै : शान्ति सुरक्षा,जनतामा जनचेतना फैलाउने जस्ता कामहरु भएका छन् । विगतमा एउटा पनि वित्तिय संस्थाहरु थिएनन् । २०६४ सालमा यस भेगमा पहिलो बैकका रुपमा कुमारी बैक हाम्रो पहलमा कान्तिपुर मलमा भित्रीएको हो । त्यसपछी धेरै बैक,वित्तिय संस्थाहरु यस भेगमा आएका हुन् । कान्तिपुर मलमा ग्राहक महानुभावहरुले वडा दशैको उपलक्ष्यमा निर्धक्कताका साथ समान खरिद गर्न सक्नुहुनेछ ।
२. कोेरोनाले समग्र क्षेत्रमा असर पार्यो । व्यापारीहरुलाई त असर नगर्ने कुरै भएन । कान्तिपुर मलले व्यापारीहरुलाई के–कस्ता राहत उपलव्ध गरायो बताईदिनुस न । ?
कोभिडका कारणले विश्व नै आक्रान्त भएको कुरा सर्वविदित नै छ । त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । व्यापार व्यवसायमा धेरै समस्याको सामना गर्नु पर्यो । राज्यवाट व्यापारीक हक हितका लागी कुनै प्रकारको सम्वोधन हुन सकेन । बैकको व्याज दर तिर्नै पर्यो ,नेपाल सरकारलाई कर तिर्नै पर्यो । त्यसका बावजुत पनि कान्तिपुर मलले पहिलो काभिडको समयमा सम्पुर्ण कान्तिपुर मलका व्यापारीहरुलाइ २ महिनाको र दोश्रो लकडाउनमा १ महिनाको भाडा छुट दियो।
३. अब चाडपर्व पनि मुखैमा आईसक्यो । ग्राहकलाई आकर्षित गर्न के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउदै हुनुहुन्छ ?
विगतका वर्षहरुमा झै कान्तिपुर मलले पुरस्कारको व्यवस्था गरे जस्तै यसपाली पनी प्रथम पुरस्कारका रुपमा यमहाको १५० सि.सि मोटरसाईकल, दोश्रोमा यमहाको स्कुटी १२५ सि.सि, तेश्रोमा मेमाको एलसिडी ४२ इन्ची, चौथोमा भिडियोकोनको १९० लिटरको फ्रिज र साथमा धेरै सान्त्वना पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौ । त्यसै गरी उत्कृष्ट १० टिकटकलाई उपहारको व्यवस्था छ । रु १००० भन्दा माथीको सामान खरिद गर्दा एउटा उपहार कुपन ग्राहक महानुभाबहरुले सित्तैमा पाउनु हुनेछ । ग्राहक महानुभावहरुले कान्तिपुर मलमा सामान खरिद गर्दा उपहार कुपन लिन नबिर्सनुहोला ।
४. कान्तिपुर मलमा पाईने सामानहरु गुणस्तरिय छन् भनेर ग्राहकहरु ढुक्क हुने अवस्था छ ?
यहाँ गुणस्तरिय सामाग्री सुपथ मुल्यमा पाउनु हुने छ । सामान खरिद गर्दा कुनै कारणवश समस्या आएमा कान्तिपुर मलको कार्यालय आएर गुनासो गर्न सक्नुहुने छ । ग्राहक महानुभावहरुलाई सेवा गर्न व्यवस्थापन कार्यालय हाजिर छ । अन्तमा सम्पुर्ण ग्राहक महानुभावहरुमा विजया दशमी २०७८को मङगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । सबैको जय होस ।
नेपाल सरकारको निर्णनय कार्तिक ७ गतेसम्म विज्ञापन नहटाए विदेशी च्यानल बन्द4views
आज काठमाडौंका निम्न स्थानमा बत्ती जाने4views